के घाटिमा सधैं समस्या हुन्छ ? ध्यान दिनुस् यी कुरामा - Kanchanjangha Online
कञ्चनजंघा अनलाईन ३ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार ०६:५५ मा प्रकाशित ( २ साल अघि) १४९९ पाठक संख्या
सधैं एकनाशले घाटि दुखेमा मौशम परिवर्तनको असर हो भनेर बस्नु हुँदैन । हरेक पटक घाटि दुख्नु न त मौसम परिवर्तन हो नत खानपानका कारण नै हो । यो गलाको खराब टन्सिल वा गलाको गम्भिर समस्या पनि हुन सक्छ । यसकारण घाटि दुखिरहनुलाई सामान्य सोचेर बस्नु हुँदैन । सामान्य नसोचौं गरौ उपचार
मौसम बदलिएसंगै गलामा असहज महशुस हुनु तथा तिखो घोचाइको भान हुनु सामान्य कुरा हो । यो अवस्थामा बोल्नमा समस्या हुनु पनि सामान्य हो । भाईरस वा ब्यक्टेरियाको करणले उक्त समस्या देखिन्छ । कहिले काहि एलर्जी र धुम्रपानको करणले पनि गला खराब हुन्छ । यस्ता धेरै समस्याहरु आँफै समाधान हुनसक्छन्, तर केही यस्ता जटिल समस्या हुन्छन् जुन सजिलै जादैनन् । त्यस्ता समस्यालाई राम्रो उपचारको आवश्यक हुन्छ । आमरुपमा मानिसहरू गलाको असरलाई त्यती ध्यान नदिएर लापरबाही गरिरहेका हुन्छन् । राम्रो उपचार गरिएन भने यसबाट गम्भिर समस्या निम्तन सक्छ । गलामा आउने समस्या गलको इन्फेक्सन हो । जसमा गलामा कर्कश आवाज आउने, हल्का कासो लाग्ने र ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, गला दुख्ने जस्ता लक्षण देखिन्छन ।
के कारण हुन्छ गम्भिर ?
हाम्रो गलामा दुबैतर्फ टन्सिल हुन्छ जसले धुलो, ब्यक्टेरिया र भाईरशलाई गलामा जानबाट रोक्ने काम गर्छ । तर कहिले कही यो आँफै इन्फेक्टेड हुन्छ र आफ्नो काम गर्न सक्दैन । जसलाई टन्सिलाइटिस भनिन्छ । जसमा घाटीभित्र दुबैतर्फ टन्सिल्स गुलाबी वा रातो हुन्छ । इन्फेक्सन हुँदा यिनिहरु अली ठुला र अली बढी राता हुन्छन् । कहिले काही यसमा सेतो कत्ला जस्तो पनि देखिन सक्छ । सधरणतया यो समस्या उचित देखभाल र एन्टिबायोटिकले निको हुन्छ तर स्ट्रेप्टोर्काक्कस हिमोलिटीकस नामक भाईरसको करणले यो समस्या देखियो भने अलिक गम्भिर हुन्छ ।
उचार कसरी ?
उक्त समस्याको संक्रमण ह्रीदय र गुदामा पनि फैलिन्छ र गम्भिर हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नियमित रुपमा नुन हालेको मनतातो पानीले गार्गेलिङ गर्नुपर्छ । यसको गरेमा गलामा आराम मिल्छ । अदुवा, इलायची र मरिचको चियाले गलाको दुखाईमा अधिक आराम मिल्छ । यसमा जीवाणुरोधक गुण पनि हुन्छ र यो चिया नियमित रुपमा सेवन गर्नाले गलामा आराम मिल्नुको साथै गलाको खराश हराएर जान्छ । धुमपान र ज्यादा मसालेदार खानादेखी पनि टाढै रहनुपर्छ । खानामा बिशेष साबधानी आपनाउनुहोस् । फ्रिज को वा अन्य कुनैपनी चिसो चिजको सेवान नगर्ने । सधैं मनतातो पानी पिउने पिउने, त्यसमा अदुवाको धुलो हल्का मिसाउने र ताजा कागतीको रस १,२ थोपा मिलाउनाले अधिक आरमा मिल्छ । सावधानि नै यो समस्याको मुल हल हो ।सधैं धुलो, धुवा र चिसो बाट बच्ने, राम्रो मास्कको प्रयोग गर्ने र समस्या देखिनासाथ तुरन्त चिकित्कसको सल्लाहा लिने
के हुन् त लक्ष्यण ?
यो प्राय केटा केटीहरुलाइ लाग्ने रोग हो तर जुनसुकै उमेरमा पनि लग्न सक्छ घाटी दुख्ने, थुक निल्दा वा खान खादा अफ्ठयारो हुने , ज्वरो आउने प्राय यो रोगका लक्षण हुन् ।
के हो टन्स्लि?
टन्सिल लिम्फाइड नामक एक विशेष प्रकारको तन्तुहरुको समूह हो । यो मुखको भित्री भाग जिब्रोको अन्तिम भागतिर फारइक्सि नाकको बीचमा रहेको हाडमा रहेको हुन्छ । टन्सिलले हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक प्रणालीमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउने गर्दछ । टन्सिलबाट लिम्फोसाइट र मोनोसाइट नामक दुई कोषको निर्माण हुन्छ जुन हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको महत्वपूर्ण अंश हो । । यसका साथै टन्सिलले म्याक्रोकाज नामको कोष पनि निर्माण गर्दछ । यो कोषले शरीरभित्र प्रवेश गरेका जीवाणुलाई नष्ट गरेर हामीलाई रोग लाग्नबाट बचाउँछ । विभिन्न कारणले गर्दा यी टन्सिलमा संक्रमण भएर सुन्निनुलाई नै टन्सिलाइटिस भनिन्छ । मौसम बदलिएसंगै गलामा असहज महशुस हुनु तथा तिखो घोचाइको भान हुनु सामान्य कुरा हो । यो अवस्थामा बोल्नमा समस्या हुनु पनि सामान्य हो । भाईरस वा ब्यक्टेरियाको करणले उक्त समस्या देखिन्छ । कहिले काहि एलर्जी र धुम्रपानको करणले पनि गला खराब हुन्छ । यस्ता धेरै समस्याहरु आँफै समाधान हुनसक्छन्, तर केही यस्ता जटिल समस्या हुन्छन् जुन सजिलै जादैनन् । त्यस्ता समस्यालाई राम्रो उपचारको आवश्यक हुन्छ । आमरुपमा मानिसहरू गलाको असरलाई त्यती ध्यान नदिएर लापरबाही गरिरहेका हुन्छन् । राम्रो उपचार गरिएन भने यसबाट गम्भिर समस्या निम्तन सक्छ । गलामा आउने समस्या गलको इन्फेक्सन हो । जसमा गलामा कर्कश आवाज आउने, हल्का कासो लाग्ने र ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, गला दुख्ने जस्ता लक्षण देखिन्छन ।-हाम्रो डक्टरबाट साभार